← Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?
Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti →
Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate
1 Phexros 3:18-22
Yeroon amma yeroo Waldaan Kristiyaana waa’ee dhiphina goofta keenya Yesus itti yaadu dha. Haala kana keessatti gaafiin nuti of gaafachuu malu keessa inni tokko, “Yesus maaliif dhiphae? …Yesus maaliif dhiphachuuf male?” kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga’aa nuuf kenna.
MAREE: Nama biraaf jecha gatii bafte beekta? Namni ati gatii bafte hidhamu, rakkina ykn qana’uu isaa oolchite sun waan sana ni yaadata immo irranfaterraa? Namni sun gocha kee kana yoo irranfaterra ta’e, irranfachuun isa irra kan ka’e maltu siti dhagame?
MEE ITTI YAADII: Gocha Waaqayyo kara Yesus Kristos siif godhe yeroo hunduma ija dura jira? Jireenyi ati harr’a jiratu kenna Waaqayyo akka ta’e ni yaadata? Yeroo dubbi kana dagattu immo sireesuf maal goota?
SEENSA: Namni tokko attamitti gara Waaqayyo dhufu, dhiifama cuubu argachu, Waaqayyotti araaramu danda’a? Namni gara Waaqayyotti dhufu sana argate immo, keesuma yeroo dhiphina Goofta keenya Yesus Kristos yaadutti waan inni irra deebi’e qalbefachu qabu maalii? Gaafii keenya hundaaf Sagaleen Waaqayyo deebii waan nuu kennuf, mee yaada fi samuu banaman, qalbii fi hafuura gadi-jeedhan gara isaatti haa dhiyanuu. Mee 1 Phexros 3:18-22tti dubbisi.
18Kristos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee, yeroo hundumaaf akka ta’utti al tokkicha, cubbuu namoota baay’eetiif dhiphateera;inni qajeelaan foon uffatee, qooda warra jal’ootaa ajjeefame, hafuuraan jiraachifameera. 19Hafuuruma sanaanis dhaqee hafuurata warra mana hidhaa keessa jiranitti lallabe. 20Isaan hafuurata namoota warra dura bara Nohitti, yeroo markabni talfame, yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti, isaaf hin abboomamin hafanii dha. Markaba kanaan namoonni muraasi, kana jechuun lubbuun saddeet bishaan keessaa oolan. 21Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltanii ti; cuuphaan waan ittiin karaa du’aa ka’uu Yesus Kristos, yaada garaa nama hin ceephaane argachuudhaaf, Waaqayyotti himatanii dha malee, waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti. 22Inni du’aa ka’e sun gara waaqaatti ol ba’ee, gara mirga Waaqayyoo jira; ergamoonni Waaqayyoo, warri aboo qabu, jedhamanii sadaataman, humnoonnis harka isaa jala jiru.
Kuta kana keessatti Kristos maaliif dhiphate jedha?
“Yeroo hundummaf akka ta’utti al tokkicha” yeroo jedhu maal wajjin walitti/wal-bira qabe dubbacha jira?
“…al tokkicha…” kun maal jechuu dha? Hiika ykn ma’i-basii maal qaba?
Dhiphachuun Kristos fayyu keettif bu’a ykn immo ga’e maali qaba?
Phexros iddo kanatti yeroo bushan badisa bara Nohii fi cuupha wal-bira qabu maal jechuu isatti?
Ergan kutan kana inni hunduma irra ijoo dubbi ta’e maal jetta? Maaliif?
Yeroo darbe “Wiirtu Waaqayyo male Nu Miti” kan jedhuu waliin qara’ane turee. Kutan haar’a kun waa’ee Waaqayyo wiirtu ta’un isaa kan nuuf mirkaneesu qaba? Attamitti?
Goofta Yesus isa Waaqayyotti sii fideef galata fi ulifina kenni. Akka inni gara laafinaa fi ayyana sii simate atis namoota bira wa’ee Kristosf jette simachuuf hubbana fi humna akka siif kennuuf kadhadhu.
“Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltanii ti; cuuphaan waan ittiin karaa du’aa ka’uu Yesus Kristos, yaada garaa nama hin ceephaane argachuudhaaf, Waaqayyotti himatanii dha malee, waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti” (1 Phe. 3:21). Cuuphan attamitti namaa oolcha? Yeroo waa’ee cuupha dubbanu waa’ee eenyu ykn waa’ee maali dubbana? Kan nama fayyisu cuuphaa dha immo Waaqayyo isaa cuupha keessan hojjetu? Ijoon dubbi kana eenyuu?
“Waaqayyo, namni hundinuu akka fayyu, dhugaa beekuu biras akka ga’u in fedha” (1 Xim. 2:4). Kanafu utuu nuti dinaa isaa tane jiru (Rom. 5:10), ilma isaa tokkicha—Goofta keenya Yesus Kristos—nuuf erge. Ilimchi immo waa’ee keenyaf jedhe dhipate; nuuf jedhe du’aa dhandhame. Ofi isaa aarsaa godhe nuuf immo karaa jireenya saaqe. Inni du’u isaattin nuuf immo jireenyi ta’e. Fayyini fi jireenyi keenya kenna Waaqayyo isaa gaaruumaa isa irra dhabate dha. Galani fi ulifini isaaf haa ta’u. Amen.
Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate — 2 Comments
Abu Tashome on December 20, 2016 at 5:36 pm said:
galanni gooftaa keenya iyesuusif haa tahu
tamirat on November 6, 2016 at 4:11 pm said:
Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu